San Htun's Diary: ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၂၂
ရိုက်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး... :P
ကျူတီဆို အဲ့လို ခဏခဏ စီးဖြစ်တယ်
welcome to New York..lolz..
နောက်တော့ မြို့ ကြီးသူဖြစ်သွားမှာပါ...
Here is New York Girl!
ကိုယ့်မှာမဒတ်ကားစကားကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။ ပီအိတ်ခ်ျဒီတက်နေတယ်။ သူတော့အ၀တ်ဝတ်တယ် အဟီး။
ကုိုယ်တည်းခဲ့တဲ့တုိုကျိုကဟုိုတယ်မှာတော့ရေချိုးခန်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ bath tub ကထုိုင်ရက်ချိုးရတာ။ တော်တော်ကျဉ်းတယ်။ ဂျပန်အစားအသောက်ကတော့ မစားရခင်မှာတောင်လှတာနဲ့ တန်နေပြီ။
ရပ်ကွက်ထဲမှာဗျာတောင် ၂၂ ထိရောက်သွားပြီ။ အလည်လာပါတယ်ဗျာ။ နေကောင်းကျန်းမာပါစ..